के जिम्मेवार मार्केटिंग प्रतिफल छ? | Martech Zone
मंगलवार, मे 29, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
धेरै अगाडी, सेन्ट गडिन प्रसिद्ध वाक्यांश लेखिएको अनुमति मार्केटिंग र यसमा एक शानदार पुस्तक लेख्यो। मसँग एक आटोग्राफ गरिएको प्रतिलिपि छ जुन म प्रेम गर्दछु र मैले प्रत्येक पुस्तक खरीद गरें। अनुमति-आधारित मार्केटिंग शानदार छ किनभने तपाईंको ग्राहकले तपाईंलाई उनीहरूलाई मार्केट गर्न अनुमति दिएको छ - राम्रो सम्झौता।
मैले भर्खर उठेको छु गहिरो अर्थव्यवस्था: समुदायहरूको धन र टिकाऊ भविष्य by बिल म्याकबिबिन राम्रो मित्र प्याट कोयलको आदेशमा। मैले पहिलो अध्याय पढें र म काटिएको छु। पुस्तक किनारमा 'सेभ अर्थ अर्थ' को पक्ष को किनार तर यो मा एक फरक परिप्रेक्ष प्रदान गर्दछ जुन म कदर गर्छु।
म साधारणतया व्यक्तिको प्रकारको 'हरितबाट दोषी हुँ' जस्तो होइन। म वास्तवमै एक व्यक्ति हो जसले पूँजीवाद र स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछ। यदि तपाइँ एक एसयूभी ड्राइभमा जान चाहानुहुन्छ जुन एक टन ग्यासलाई जलाउँछ भने, यो तपाइँको प्राध्यापक हो। यदि तपाईं गैरजिम्मेवारपूर्ण हुन र संसारलाई नष्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस् र प्रयास गर्नुहोस्। अवश्य पनि म तपाईंलाई शक्ति र लोकतन्त्रको सन्तुलनमा विश्वास गर्दछु रोक्नको लागि। सबै भन्दा, म एकको कार्यको लागि व्यक्तिगत जवाफदेहितामा विश्वास गर्दछ ... जसले मलाई उत्तरदायी मार्केटिंगमा ल्याउँदछ।
यहाँ इण्डियानामा, तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा कसैलाई एक घर loanण दिनेछन्। घरहरू सस्तो भए पनि, इन्डियानाको देशमा सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने पूर्वानुमान दरहरू छन्। मानिसहरुलाई यी घरहरू बेच्ने मानिसका लागि जवाफदेहीता कहाँ छ र उनीहरूलाई थाँहा गर्न नसक्ने मानिसहरूलाई थाहा छ? यदि एक डाक्टरले एक दुर्व्यसनी को लागी दुर्व्यसनी दर्द हत्यारहरु निर्धारित, हामी जेल मा फ्याँक्न को लागी तयार छौं। तर एक गैरजिम्मेवार बजार जसले उत्पादन वा सेवाहरू बेच्ने मानिसहरूका लागि आवश्यक पर्दैन उनीहरूलाई पछाडि ठोकिन्छ मात्र, उनीहरूलाई आर्थिक इनाम पनि दिइन्छ। बढि बेच्नुहोस् ... त्यो ड्राईभि mot आदर्श हो!
म एक क्षणको लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको बारेमा मेरो टिप्पणीमा फर्कनेछु ... म विश्वास गर्दछु कि हामी आफ्नै कार्यहरूको लागि जिम्मेवार छौं। मलाई लाग्छ कि हामीले ती मानिसहरुलाई दबाब दिन जरुरी छ जसले मानिसका आवश्यकता र इच्छितलाई हेरफेर गर्न वा प्रयोग गर्न प्रयास गर्दछ। जिम्मेदार मार्केटिंग हावी हुनुपर्दछ। जिम्मेदार मार्केटिंग भनेको उत्पाद वा सेवाको बजारका अर्थ हुन्छ तपाईंलाई थाहा छ कसैलाई आवश्यक पर्ने कसैलाई आवश्यक छ। जिम्मेदार मार्केटरहरूले उपभोक्ताहरूको पक्ष लिन्छन्, तिनीहरूलाई समय वा पैसा बचत गर्दै ...। यसलाई बेच्न केवल यो बेच्न को खातिर।
दीप इकोनोमीको पहिलो अध्यायमा, यसले 'अझ उत्तम छ' भन्ने धारणालाई चुनौती दिन्छ - जुन संस्कृति सरकार र बजारहरू दुबैले दबाब दिन्छ। तपाईलाई नयाँ खेलौना, नयाँ कार, नयाँ घर किन्नको लागि लगातार प्रोत्साहन दिईएको छ ... उपभोग, उपभोग, उपभोग र तपाईं खुशी हुनुहुनेछ। तर हामी खुशी छैनौं। म यसमा विस्तारमा जान सक्दिन - यो सबै मेरोमा छ खुशी घोषणापत्र। म केवल आशा गर्दछु कि मैले पुस्तक पढ्दा कि यसले 'हरियो' चिच्याउँदैन तर आफैंलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी राख्ने न्यूनतर समाजहरूलाई धक्का दिन्छ।
बढी बेच्न रोक्नुहोस्। तपाईलाई चिन्नु भएका मानिसहरूलाई फेला पार्दै बढि बेच्नुहोस्। यदि तपाईको अधिग्रहणको लक्ष्य तपाईको रोकावटलाई सजिलो बनाउनु हो भने, तपाई सायद भीडलाई तपाईको सामान बेच्दै हुनुहुन्न - वा हुनसक्छ तपाईसँग राम्रो उत्पादन वा सेवा छैन तपाईसँग सुरु गर्नुपर्नेछ।
टैग: बिल म्याकबिबिनगहिरो अर्थव्यवस्थाप्याट कोयल
मई 30, 2007 मा 8: 13 एएम
मेरो सोच सँधै यो भएको छ कि तपाईं वास्तवमै बेच्नुहुन्न, तपाईं कसैलाई सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ जुन आवश्यक छ। जे भए पनि ठुलो वा सानो होस्, यदि तपाइँ "बेच्नुहोस्", तर "सेवा" दिनुहुन्न भने तपाईं जहिले पनि लामो दौडमा (अधिक छोटो दौडको) सधै बढी सफल हुनुहुनेछ। जब सम्म, पक्कै पनि, तपाईंको नाम रोन्को हो र तपाईंले केही लसुन प्रेस / प्याज चपर / बटवाइटेरको अधिक प्रकारको विचार पाउनुभयो, तब तपाईं म जस्तो व्यक्तिहरूसँग सफल हुनुहुनेछ जुन ग्याजेटहरू मन पराउँछन् र सुत्न सक्दैनन् यसैले ल्युल्ड हुन्छन्। तिनीहरूलाई आवश्यक छैन चीजहरू खरीद गर्नुहोस्। सेवा गर्नका लागि, यो पृथ्वीमा वास्तवमै हाम्रो जनादेश हो, होइन र?
मई 30, 2007 मा 9: 03 PM
राम्रो Jule भने। मलाई लाग्छ हाम्रो जनादेश सेवा गर्नु पर्छ। म अझै कसलाई सेवा गर्ने र के सेवा गर्ने भनेर पत्ता लगाउन कोसिस गर्दैछु।